Jamaica ji ihe ọhụrụ megharịa ya na Expo 2020
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Jamaica ji ihe ọhụrụ megharịa ya na Expo 2020
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Emebere njem nlegharị anya Jamaica iji gosipụta ngwaahịa na ihe ọhụrụ ya na World Expo 2020 Dubai na United Arab Emirates (UAE). Isiokwu Jamaica Pavilion na World Expo 2020 bụ: "Jamaica na -eme ka ọ gaa," na -egosi na ma ọ bụ egwu ma ọ bụ nri ma ọ bụ egwuregwu, Jamaica na -akwagharị ma jikọọ ụwa.
Ndị sonyere na World Expo ga -atọ Jamaica ụtọ na nnukwu ụlọ ezumike ha.
Pavilion ahụ na -egosipụta ọdịbendị Jamaica na ebumnuche iji gbanwee ma webata agwaetiti ahụ dị ka ebe a na -eme lọjistik na -ejikọ America na ụwa ndị ọzọ.
N'ụlọ ntu nke nwere mpaghara 7, ndị ọbịa ga -enwe ike ịhụ nlegharị anya, ụda na ụtọ Jamaica.
Enweela aha Jamaica Pavilion dị ka otu n'ime "kacha mma" na World Expo 2020 Dubai.
“Ọ dị mkpa ka e mee ka Jamaica nọchite anya ya na ngosipụta ụwa a iji gosipụtakwa ọdịbendị ọzọ bara ụba na agwaetiti ndị mara mma. Ndị sonyere na World Expo ga -atọ ụtọ ebe ọ ga -aga ma ghọta ihe kpatara anyị ji bụrụ 'Ọkụkụ nke ụwa' '”Donovan White, onye isi njem nlegharị anya nke Jamaica kwuru.
Donovan White, onye isi njem nleta na Jamaica
Ịdị iche nke ụlọ ntu ahụ na -egosipụta omenala nke Jamaica na ebumnuche iji gbanwee ma webata agwaetiti ahụ dị ka ụlọ ọrụ lọjistik na -ejikọ America na ụwa ndị ọzọ. Pavilion ahụ nwere mpaghara 7, nke ga -enyere ndị ọbịa aka ịhụ nlegharị anya, ụda na ụtọ Jamaica; ka Jamaica si akwagharị ụwa; ma jee ozi dịka njikọ njikọta.
Pavilion nwere ụlọ ihe nkiri egwu dị ndụ nke na -egosipụta ụfọdụ ndị egwu egwu Jamaica, ndị na -ese ihe na ndị na -emepụta ihe; ebe ndị mmadụ nwere ike ige egwu egwu Jamaica, mepụta listi ọkpụkpọ nke ha, wee jide ọnọdụ agwaetiti ahụ mara mma ka ha na -anụ ụtọ ezigbo nri ọdịnala sitere na ụfọdụ ndị isi Jamaican Chefs na -eji ngwakọta ahịhịa na ngwa nri pụrụ iche. Ihe pụrụ iche ọzọ bụ ngwa Nsorouzọ iji nweta njem nlegharị anya na nyocha Jamaica dị ka ebe ndị njem na -eme njem.
Ihe ngosi Dubai nke e mere atụmatụ ime na afọ gara aga ga-eme ugbu a site na Ọktoba 1, 2021, ọ ga-aga n'ihu ruo Machị 31, 2022. E yigharịrị ihe omume ahụ n'ihi ntiwapụ nke COVID-19 gafee ụwa. Ngosipụta 2020 bụ nke izizi a ga -eme na Middle East, Africa, na South Asia yana ọ na -akwado maka ịkwalite mkparịta ụka zuru ụwa ọnụ, na -ebute isi okwu nke "ijikọ uche, imepụta ọdịnihu." A na-atụ anya na World Expo ga-adọta nde mmadụ iri ise na ise n'ime ọnwa isii.